Ihe 3 ahụ na-ekwu na B2B CMO ọ bụla kwesịrị ịdị ndụ ma na-eme nke ọma na 2020 | Martech Zone
Ka ọnọdụ akụ na ụba na-eru nso na nlaazu na mmefu ego ụlọ ọrụ na-ebelata, eziokwu maka ndị na-ere ahịa B2B afọ a bụ na dollar ọ bụla e mefuru ga-ajụ ajụjụ, nyochaa, na ọ ga-adị mkpa ka ọ bụrụ na ọ ga-agbakwunye na ego. Ndị isi ahịa ga-elekwasị anya na ịgbanye ego ha na usoro na mmemme nke dabara na eziokwu ọhụrụ nke onye na-azụ ahịa yana ịmekọrịta ahịa iji nweta ihe mgbaru ọsọ ego maka afọ ahụ.
Mana olee otu CMO ga-esi mara ma ọ bụrụ na ha na-etinye ego na mmemme na usoro kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ha enweghị isi mmalite nke data na nchịkọta dịịrị ha? Kedu ka ha ga - esi kwenye ndị isi azụmaahịa ha na ndị isi na ndị otu na azụmaahịa abụghị iji ego emefu ego kama itinye ego na ntinye ego n'ọdịnihu yana injin na-eto eto maka azụmaahịa ahụ?
Site na mmefu ego na nsogbu ndị ọzọ COVID-19 metụtara, ịnweta data na nyocha a tụkwasịrị obi dị mkpa karịa mgbe ọ bụla n'ihi na ha na-enyere ndị CMO na ndị isi ahịa aka igosi ROI, kee ọrụ ahịa ozugbo na ego ha nwetara, ma nwalee ụzọ dị iche iche na ọwa iji chọpụta ọdịnihu itinye ego. Site na okike, ekwesịrị ka ha bụrụ ndị na-akọ akụkọ-yabụ gịnị kpatara na anyị enweghị ike ịtụ anya ịkọ akụkọ na data nke anyị? Nke a kwesịrị ịbụ okpokoro okpokoro — na 2020 na karịa.
Otú ọ dị, eziokwu bụ na ọ bụ ezie na ndị isi ahịa nwere ike ịnweta ọtụtụ puku ihe data na ọtụtụ narị akụkọ, ha nwere ike ọ gaghị elekwasị anya na ndị kachasị emetụta azụmahịa ahụ-karịsịa mgbe ahịa na-agbanwe ngwa ngwa. Emeela m ka ọ dị warara ruo n'ihe m hụrụ dị ka akụkọ atọ kachasị dị egwu nke ndị CMO kwesịrị ịnwe na mkpịsị aka ha ugbu a:
Akụkọ Ndu-Ego Nweta
Ndị MQL gị na-emepụta ego? Nwere ike igosipụta ya? Ọ dị ka echiche dị mfe ma kwụ ọtọ ka ị nwee ike soro isi iyi azụmaahịa nke ndu wee hụ na 'akwụ ụgwọ' maka data ahụ na ohere emesịa yana ego metụtara ya.
Agbanyeghị, n'eziokwu, ahịa B2B dị ogologo ma dị oke mgbagwoju anya, metụtara ọtụtụ mmadụ na akaụntụ ahụ na ọtụtụ akara aka na ọwa na njem onye zụrụ ahịa. Tụkwasị na nke a, a na-achọkarị ire ahịa iji mepụta nduzi nke aka ha nke na-asọ mpi ma ọ bụ ọbụna na-achịkwa ahịa na-eduga na CRM. Iji hụ na ịdị nsọ nke data a na akụkọ (s) kwekọrọ, ọ dị oke mkpa na CMO jikọtara nke ọma na isi ahịa na usoro maka ịmị ụzọ na ohere.
Pro NDỤMỌDỤ: Onye buru ụzọ mepụta ndu (ahia ma ọ bụ ọrịre) kwesiri iso ụzọ niile iji mepụta ohere iji chekwaa data ahụ. Uru ọzọ dị na nke a bụ na ị ga-enwe ike ịlele oge ọkara iji mechie.
Akuko Ọsọ Pipeline
Kedu ka ị si egosi - site na data — na ahia ahụ na ahịa? Ndị isi ahịa na-ekwu maka mmekọrịta chiri anya ha na ahịa na oge niile (gụọ: mgbe niile) mana ha kwesịrị igosi na ndị ahịa ha ruru eru (MQLs) nwere nnukwu nnabata nke ahịa, nke pụtara ịtụgharị ha na ahịa ruru eru (SQLs) . Organizationstù ahia ndị guzobere usoro iwu maka ire ahịa ịnakwere na ịjụ nduzi NA-anakọta data qualitative na ihe kpatara ịjụ ya bụ ndị edoziri maka ihe ịga nke ọma na ịkọ akụkọ na mmụba na mpaghara a dị oke egwu.
Maka ụlọ ọrụ ndị ahụ metụtara azụmaahịa na-adabere na akaụntụ (ABM), nke a gbanwere egwuregwu ahụ kpamkpam, n'ihi na ndị ahịa ahụ na-ejikọta pọtụfoliyo nke akụkọ aha ya na pọtụfoliyo nke akaụntụ aha ya. N'ihi ya, ihe mgbaru ọsọ ga-abụ ịlele ịdị irè nke ụzọ abụọ (ahịa na ahịa) dị irè (na-emepụta ego) na arụmọrụ nke ọ bụla dị ka akọwara n'elu. Imirikiti òtù B2B anaghị (ma) na-eme mkpesa ABM na oke nke MQL na SQL n'ihi na ha nwere usoro ịkọ akụkọ dị iche na, yabụ, enweghị mkpali ịkọkọ ọnụ.
Pro NDỤMỌDỤ: Gbanwee ihe mkpali na ugwo nke ndi otu abuo, nye ndi otu abuo ugwo na uzo nke uzo ndi ozo dika onu ogugu n'etiti ahia na ahia ahia, onu ogugu MQL ndi gbanwere SQLs, na onu ogugu nke SQL ndi gbanwere ohere .
Ọdịnaya Nrụpụta Ọdịnaya
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ahịa na-ere ahịa taa ewepụtala usoro atụmatụ siri ike dabere na onye zụrụ ahịa, ha ka na-agbasi mbọ ike ịkọwapụta akụkọ dị mfe dị mfe na-egosipụta nke dị elu na nke na-adịghị arụ ọrụ. Ọ bụ ezie na ọdịnaya n'onwe ya nwere ike kacha mma na klaasị, ọ baghị uru ọ gwụla ma ndị na-ere ahịa nwere ike igosi ihe kpatara ya na mmetụta ọ nwere na azụmaahịa a.
Nọmalị, ahịa akụkọ na-a onye gbadoro anya, (yabụ njem ndị ahịa ma ọ bụ ndu ndụ), iji soro mmetụta ego na-enweta, mana ị nwekwara ike ịtụle ịkọ akụkọ site na iji ọdịnaya dakọtara wee tụọ akụ ọ bụla n'ụzọ niile wee nweta ego. N'ime usoro eji arụ ọrụ nke ọma, akara aka ndị ahụ na-agbakọ site na ndekọ nke onye ahụ. Nyere anyị zighachi akwụkwọ nnọchiteanya maka ego bụ ndị mmadụ na anyị n'ihe maka ọdịnaya bụ ndị mmadụ (na oriri ha nke ọdịnaya), ọ bụla ọdịnaya touchpoint nwere ike ekewet revenue. Ọ bụ otu data ahụ na-akwado njem ndị ahịa, na-ele ya anya site na ọdịnaya.
Pro NDỤMỌDỤ: Ọ bụrụ na ịnye ụtụ na ihe ọdịnaya ọdịnaya dị ukwuu, gbalịa itinye ọdịnaya na MQLs. Can nwere ike ịhazi ọdịnaya gị site na ọnụọgụ MQL nke ọ bụla ejiri rụọ ọrụ. Nweziri ike ibikọ nkewa MQL gafee usoro ọdịnaya.
Tags: azụmahịa na azụmahịaonye isi ahiaKeduọdịnaya ọdịnayaCOVID-19njem ndị ahịandu-egoahia ahiandị isi ahịaarụmọrụ ahịammkwọkpọkọ ọkpọkọpipeline ọsọ ọsọ akụkọakuko
Eric Hollebone, Onye isi ọrụ, na-eweta ChọọEcosystem Ego ha na-enweta na ndụ maka ndị ahịa B2B ha site na ijikọta atụmatụ, teknụzụ, na data n'ofe ahịa, ahịa na ọrụ na-aga n'ihu. Nzụlite na teknụzụ na injinia na-enyere Eric aka ịbịaru ahịa site na ọnọdụ sayensị, teknụzụ, na nke data. Taa, ọ na-elekwasị anya na ikike maka nnukwu data, AI, teknụzụ nke mgbama, na IoT iji gbanwee mpaghara ahịa ma mee ka mgbanwe dijitalụ mee ngwa ngwa na nzukọ ahụ.